Semalt: Ireo toro-hevitra momba ny tranonkala Scrape - Aza milavo lefona!
Rehefa tsy azonao ny angon-drakitra takian'ny Internet dia fomba hafa ahafahana mampiasa azy ireo mba hahazoana ireo olana ilaina. Azonao atao, ohatra, ny angona azo avy amin'ny API ao amin'ny tranonkala, manintona ny angona avy amin'ny pdf samihafa na avy amin'ny tranokala scrape. Ny fampindrana angona avy amin'ny PDF dia asa sarotra satria ny PDF dia tsy ahitana ny fampahalalana marina izay mety takiana. Etsy ankilany, mandritra ny dabam-pikirakirana, ny votoaty entina dia voarakotry ny fehezan-dalàna iray na amin'ny fampiasana fitaovana famonoana. Ny famoahana ireo angona anaty alàlan'ny tranonkala dia mety ho asa sarotra, fa rehefa mandeha ny fotoana iray dia misy ny zavatra tokony hatao, dia lasa mora izany.
Ireo angon-drakitry ny masinina
Ny iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny fanalana ny tranokala dia ny fahafahana miditra amin'ny angon-drakitra amin'ny masinina. Ireo angona ireo dia noforonin'ny ordinatera ho an'ny fanodinana, ary ny sasany amin'ireo ohatra formatany dia ahitana XML, CSV, Excel files, ary Json. Ny angon-drakitry ny masinina dia iray amin'ireo fomba samihafa azon'ny olona ampiasaina mba ahafahana manangona angon-drakitra amin'ny tranokala toy ny fomba tsotra ary tsy mila teknika avo lenta mba handaminana izany.
Ny tranokala manodina dia iray amin'ireo fomba fampiasana matetika amin'ny fampahafantarana ny vaovao ilaina. Indraindray misy tranonkala tsy miasa tsara.
Na dia aleon'ny alikaola aza ny tranokala, dia misy karazany maro izay mampihetsi-po kokoa. Ny sasany amin'izy ireo dia ny code HTML izay misy format malalaka ary ny fanakanana ny fahazoana fidirana. Ny sakana ara-dalàna ihany koa dia mety ho olana amin'ny fampandehanana ny angon-drakitra amin'ny tranokala toy ny misy olona sasany izay tsy miraharaha ny fampiasana fahazoan-dalana. Any amin'ny firenena sasany, dia heverina ho manohintohina izany. Ireo fitaovana izay afaka manampy amin'ny famafàna na fampirimana ny fampahalalana dia ahitana tolotra tranonkala sy tranokala sasany izay miankina amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny tranokala. Ny tahirinan'ny tranonkala dia afaka hita ao Python na PHP. Na dia mitaky fahaiza-manao maro aza ny dingam-panaovana dia mety ho mora izany raha ny tranonkala ampiasain'ny iray no marina Source .